Wolfenstein - Blade of Agony: GZDoom အတွက်ရရှိနိုင်သည့်ဗားရှင်း ၃.၀ | Linux မှ
မနေ့ကအဖြစ်အပျက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးနောက်ဆုံးသတင်းကောင်းကိုငါတို့ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် FPS ဂိမ်း ကိုခေါ် "unvanquished", ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုမှုကိုကြေငြာမည် "Wolfenstein - Agony ၏ဓါး".
"Wolfenstein - Agony ၏ဓါး" ဒါကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးပျော်စရာပါ FPS ဂိမ်း အဖြစ် doom ii mod အတွက်သတ်မှတ်ထားသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လက်ရှိ၎င်း၏ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သော နောက်ဆုံးဗားရှင်း, နံပါတ် 3.0.
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သတင်းနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသို့မရောက်မီ "Wolfenstein - Agony ၏ဓါး", တူညီတဲ့ဂိမ်းပေါ်တွင်ကစားရန်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည် GNU / Linux များသင်အသုံးပြုသင့်သည် gamer app ခေါ်ဆိုခ GZDoomကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင် entries တွေကိုတစ် ဦး အရသိရသည်သော
"GZDoom DoD အတွက်ဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ZDoom ကိုအခြေခံသည်။ ၎င်းကို Christoph Oelckers မှဖန်တီးပြီးထိန်းသိမ်းထားပြီးနောက်ဆုံးထုတ်လွှတ်ထားသောတည်ငြိမ်သောဗားရှင်းမှာ ၄.၀.4.0.0 ဖြစ်သည်။ ZDoom နှင့်မရင်းနှီးသောသူများအတွက်မူ၎င်းသည်မူလ ATB Doom နှင့် NTDoom ကုဒ်များ၏ဆိပ်ကမ်းဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင် Randy Heit နှင့် Christoph Oelckers တို့ကထိန်းသိမ်းထားသောပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စီမံကိန်း။ ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုရပ်တန့်ပြီးနောက် Christoph သည် GZDoom စီမံကိန်းအသစ်ကိုဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်"။ GZDoom ၄.၀.၀ - Vulkan ကိုစမ်းသပ်မှုအသစ်ဖြင့်ဖြန့်ချိမည်
ပြီးတော့သင်ယူဖို့ GZDoom ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ ထည့်သွင်းအသုံးပြုပါ, ငါတို့ဤသည်အခြားယခင် entry ကိုရှာဖွေစူးစမ်းဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်:
1 Wolfenstein - Blade of Agony: ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏ Doom II ပုံစံ
1.1 Wolfenstein - Agony of Blade ဆိုတာဘာလဲ။
1.2 ဂိမ်းကဘာလဲ? သမိုင်း
1.3 နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း ၃.၀ တွင်ဘာအသစ်တွေရှိသလဲ။
1.4 ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် screenshots များ
Wolfenstein - Blade of Agony: ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏ Doom II ပုံစံ
Wolfenstein - Agony of Blade ဆိုတာဘာလဲ။
အဆိုပါအညီ « Wolfenstein - Blade of Agony »၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၎င်းကိုဖော်ပြထားသည် -
"သမိုင်းနှင့်အတူတစ် ဦး FPS ဂိမ်း။ Wolfenstein 1990D၊ Medal of Honor နှင့် Call of Duty စသည့် ၁၉၉၀ နှင့် ၂၀၀၀ အစောပိုင်းက WWII သေနတ်သမားများကမှုတ်သွင်းခဲ့သော်လည်း Doom ၏စိတ်ဓာတ်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာကစားနိုင်ခဲ့သည်။ ဒီဂိမ်းကို GZDoom အင်ဂျင်ကိုအခြေခံပြီးသီးခြားစီကစားနိုင်သည်။" ဂိမ်းအကြောင်းအပိုင်း (အကြောင်း)
"၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ စစ်ပွဲသည်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်လုနီးပြီ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်သည်မဟာမိတ်တပ်များနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးဆိုဗီယက်များသည်အရှေ့ဘက်သို့ရှေ့သို့တွန်းပို့နေသည်။ စစ်ပွဲများဒီရေလှည့်ပြောင်းနေပြီးဟစ်တလာ၏အောင်ပွဲသည်လက်လှမ်းမမီနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေပုံရသည်။ သို့သော်အမြတ်ထုတ်ရန်ငြင်းဆန်သောနာဇီများသည်လူ့စမ်းသပ်ချက်များနှင့်ဝှက်ထားသောအပိုပစ္စည်းများကိုသူတို့စွဲမက်သွားပြီးနောက်ဆုံးပျက်စီးခြင်းမှဖြစ်နိုင်ချေရှိသောလမ်းကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ မဟာမိတ်ခေါင်းဆောင်များသည်ဤဖြစ်နိုင်ခြေကိုအနတ္တအဖြစ်ငြင်းပယ်ကြသည်။ သို့သော်အချို့သူများကFührer၏အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်လက်၍ ကြောက်ရွံ့နေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်အခြေအနေမှာတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ဖြစ်ပြီးအနည်းငယ်သာသေချာသည်။"
"သင်က Cpt ဖြစ်ကြသည်။ ဝီလျံ "BJ" Blazkowicz၊ မဟာမိတ်သူလျှို၊ ရဲရင့်သောရဲရင့်ခြင်းနှင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်ရန်အကောင်းဆုံးစစ်သည်။ သို့သော်၊ သင်၏အခန်းကဏ္ changed မှာပြောင်းလဲသွားပြီ။ သင်သည်တက်ကြွသောတာ ၀ န်မှအနားယူခဲ့ပြီးယခုအခါစနစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူအဖြစ်လည်ပတ်နေသည်။ သင်ကညစ်ပတ်ပေရေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ့်အစား ဦး ဆောင်ပြီးလှုံ့ဆော်ဖို့ရွေးချယ်ခြင်းသည်မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သင်ထင်ခဲ့တယ်။ အနည်းဆုံးရက်အနည်းငယ်အထိ၊ သင့်မိတ်ဆွေဟောင်းနှင့်ရဲ။ Cpt ထံမှစာဝှက်ထားတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုကိုသင်ရသောအခါ။ ဒေါက်ဂလပ်ခ်ျဘလိတ်ခ်, သင့်ကိုဝန်ဆောင်မှုသို့ပြန်ခေါ် ..."
နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း ၃.၀ တွင်ဘာအသစ်တွေရှိသလဲ။
el en « Wolfenstein - Blade of Agony »၏တရားဝင်ဘလော့ဂ်အထူးသခေါ်ပို့စ်တွင် «Agony ၏ Blade ကိုလွှတ်!«၎င်း၏ဖန်တီးသူများကအချိန်ကြာမြင့်စွာ (၆ နှစ်၊ ၁ လနှင့်ရက်ပေါင်း ၂၀) အပြီးတွင်၎င်းတို့သည်နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့သည် "Wolfenstein - Agony ၏ဓါး"။ သူတို့စဉ်းစားသောအရာသည်သူတို့၏ဖန်တီးမှုလွတ်လပ်မှုအောက်တွင်၎င်းသည်တရားဝင်ဆက်နွယ်မှုဖြစ်နိုင်ပုံကိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်ဖြစ်သည် Wolfenstein 3Dတူဂိမ်းများအားဖြင့်မှုတ်သွင်း "RTCW, တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်ဂုဏ်ပြုတံဆိပ်"ဒါပေမယ့်လှည့်ကွက်နှင့်အတူ။
နှင့်ဤနောက်ဆုံးဗားရှင်း၌တည်၏ ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်း နှင့် များစွာသောရှားပါး features တွေ ဒီအမျိုးအစားမျိုးမှာအောက်ပါတွေကိုဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
ကွဲပြားခြားနားသောအခန်း ၃ ခန်း (လျှို့ဝှက်မြေပုံများ) တွင်ဖွင့်နိုင်သောနှင့်ထူးခြားသောအဆင့် ၃၀ ရှိသည်။
အသံဖြင့်သရုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ soundscapes ။
ကွဲပြားသောဘာသာစကား ၁၀ မျိုးဖြင့်ရနိုင်သည် (en, de, es, ru, pt, it, tr, fr, cz, pl) ။
လှည့်ကွက်ကြံစည်မှု၏တိုးတက်မှုကိုထောက်ခံပြီးဂိမ်းကိုနားလည်ရန်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့် NPC များ။
တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ပိုမို၍ တက်ကြွ။ စိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေရန်ရန်သူတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
လှပသောအထူးသက်ရောက်မှုများနှင့်ခေတ်သစ် Post-processing shaders ။
"Wolfenstein - Blade of Agony ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည်အသက် ၈၀ နှင့် ၉၀ နှစ်များအတွင်းမွေးဖွားခဲ့သောကျောင်းသူဟောင်းများအတွက်အထူးအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖန်တီးရန်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့သည်; ၎င်းသည်ပုံရိပ်ယောင်များနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းသာမကဘဲကြက်ဥအမဲလိုက်ခြင်းနှင့်ညွှန်းဆိုခြင်း၊ retro ခံစားမှု၊ သင့်အတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိစရာများစွာရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားချွေးများ၊ အာရုံကြောများနှင့်အသက်ရှင်ရန်အချိန်များစွာကုန်ကျသောအရာကိုသင်နှစ်သက်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ငါတို့ဖန်တီးဖို့အတွက်ကစားရတာပျော်စရာကောင်းအောင်လုပ်ပါ။"
အထက်တွင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့ "Wolfenstein - Agony ၏ဓါး" ပြေးပါ GZDoom။ ထို့ကြောင့် GZDoom ကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ဖော်ပြခဲ့သောဆက်စပ်ထုတ်ဝေချက်တွင်ရှင်းပြခဲ့သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်သက်ဆိုင်ရာဖိုင်ကိုသာဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ GZDoom မှ ဒေါင်းလုပ်အပိုင်း.
ဒေါင်းလုပ်ချပြီးဖြုတ်ချထားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်တရားဝင်ညွှန်ကြားချက်များအရဖိုင်ကိုကူးယူသင့်သည် «boa.ipk3 » ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GZDoom ဖိုင်တွဲထဲကိုသွားပြီး GZDoom အင်ဂျင်ကိုဖွင့်ပြီးရွေးပါ "Wolfenstein - Agony ၏ဓါး" ငါတို့အကြိုက်ဆုံးဂိမ်း (IWAD) လိုပဲ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုအဘို့, ငါတို့အကြောင်းကို Respin (တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်နိုင်သောလျှပ်တစ်ပြက်) ထုံးစံအမည်ရှိ အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linux အရာအပေါ်အခြေခံသည် MX Linuxကျနော်တို့အောက်ပါတို့ကိုပြုပါပြီ
ကူးယူထားသော compressed ဖိုင်၏ထုတ်ယူခြင်းမှဖန်တီးထားသောဖိုင်တွဲ၏ပါဝင်မှုအားလုံးကိုကူးယူခြင်းမပြုဘဲ၊ ဖိုင်များအား ထပ်မံ၍ ရေးသွင်းခြင်းမပြုဘဲ၊ «/opt/gzdoom» ငါတို့သည်လမ်းကြောင်းထဲမှာရှိလက်ရှိ configuration file ထဲမှာတူညီတဲ့ configure «/home/$USER/.config/gzdoom/gzdoom.ini»အောက်ပါလမ်းကြောင်းများအပါအ ၀ င် «Path=/opt/gzdoom», «Path=/opt/gzdoom/soundfonts» y «Path=/opt/gzdoom/fm_banks».
ပြီးရင်ငါတို့ run လိုက်တယ် GZDoomအခြားဂိမ်းများကိုပြုပြင်မထားသဖြင့်၎င်းသည်တိုက်ရိုက်ပြသနာမရှိဘဲစတင်ခဲ့သည်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Wolfenstein - Blade of Agony», စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးပျော်စရာ FPS ဂိမ်း အဖြစ် doom ii mod ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နှင့် canon နှင့်အတူ set Wolfenstein; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Wolfenstein - Blade of Agony: GZDoom အတွက်ဗားရှင်း ၃.၀ အသစ်ရရှိနိုင်သည်
မင်္ဂလာပါ, Milagro ။ မင်းရဲ့မှတ်ချက်တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါကငါတို့စာဖတ်သူတွေရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူတိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ Crypto မိုင်းလုပ်သားများသည်အခမဲ့ cloud platform ဝန်ဆောင်မှုများကိုအခွင့်ကောင်းယူနေကြသည်
Unvanquished - အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသော FPS ၏ Beta အသစ်နံပါတ် 0.52